Puntland iyo Xukuumadda Soomaaliya oo heshiis kala saxiixday - Awdinle Online
Puntland iyo Xukuumadda Soomaaliya oo heshiis kala saxiixday
Wasaaradaha waxbarashada xukuumadda federalka ah e Soomaaliya iyo Puntland ayaa heshiis ka gaarey murankii ka taagnaa bixinta shahaadada fasalka 12aad (Form 4) ee dugsiyada sare ee deegaamada Puntland.
Wasiirada waxbarashada Puntland iyo heer federal oo kulamo saacado qaatay ku yeeshay Garoowe ayaa warbaahinta u soo bandhigay heshiiska la gaarey waxaana ay sheegeen in la fasaxay shahaadadii fasalka 12aad ee dugsyada sare ee Puntland.
War-saxaafadeed ay wadajir u soo saareen wasaaradaha waxbarshada Dowladda Federaalka iyo Puntland ayaa lagu sheegay in kulan ay yeesheen madaxda labada wasaaradood ay isku afgarteen qodobada kala ah.
1- In adayda Puntland ee dhamaysay dugsiga sare loo fasaxay shahaadadii dugsiga sare ee federaalka oo laga heli doono xarunta Wasaaradda Waxbarshada Puntland iyo tan Federaalka ee Muqdisho.
In la isugu yimaado shirweyne looga arrinsanayo arrimaha waxbashada dalka.
Muddo labo sano ardayda Puntland ee dhamaysatay dugsiyada sare ayaa helin shahaadada Dowladda Federaalka.
Previous articleMas’uulkii ugu horreeyay oo fuliyay Amarkii Hanti dhowraha Qaranka
Next articleRW Rooble oo cabasho ka gudbiyay Madaxda Puntland